Ihe kpatara ndị ahịa ji chọọ CMS na ngwa ọrụ ha afọ a | Martech Zone
Ọtụtụ ndị na-ere ahịa na mba ahụ na-elelị ezi uru ọ bara na a Sistemụ Ahịa Ọdịnaya (CMS) nwere ike inye ha. Ihe omuma a di nma n’enye otutu ahia n’emeghi ka ikwe ka ha meputa, kesaa ma nyochaa ihe di n’ime ahia.
Kedu ihe bụ CMS?
A usoro njikwa ọdịnaya (CMS) bụ ngwanrọ ngwanrọ na-akwado okike na mgbanwe nke ọdịnaya dijitalụ. Usoro njikwa ọdịnaya na-akwado nkewa nke ọdịnaya na ngosi. Njirimara dị iche iche dị iche iche mana ọtụtụ gụnyere mbipụta weebụ, mmekorita, njikwa nhazi, ndezi akụkọ ihe mere eme na njikwa nsụgharị, ndenye aha, ọchụchọ na weghachite. Wikipedia
Na 2016 anyị Nkwupụta steeti nke Marketing Technology anyị chọpụtara na 83% nke azụmaahịa na-eji CMS ugbu a, na-etinye ya dị ka ngwa ahịa ahịa ha na-ejikarị. N'agbanyeghị nke ahụ, ọtụtụ ndị na-ere ahịa na-efunahụ ezi uru ndị nyiwe ndị a nwere ike ịnye na usoro mgbasa ozi ha na ROI.
Nnyocha anyị gosikwara na ihe karịrị ọkara nke ndị ahịa na-agbasi mbọ ike iji teknụzụ ahịa na-enweghị atụ karịa ego mbụ (53%). Site na CMS karịsịa, enwere ọtụtụ ihe n'elu ikpo okwu karịa ndị ahịa na-aghọta n'ezie, yabụ, ọ dị oke mkpa na a na-eji ngwaọrụ ndị a iji kwado ihe okike ma gbaa ndị ahịa ume ka ha chee echiche na mpụga igbe ahụ.
CMS kwesiri inye ndi oru aka ka ha nye ha ọdịnaya nke ha na ndi mmadu na ndi ahia ha, ebe ha na azaghachi ihe ndi choro choro. Ebe ndị ahịa na-arụkọ ọrụ ugbu a na ụdị dị iche iche nke ngwaọrụ dị iche iche n'oge dịgasị iche, ijikọ ngwaọrụ na njikọta ọwa bụ isi mana ọ nwere ike ịbụ aghụghọ. Akụkọ anyị nke 2016 chọpụtara nke ahụ ọkara ndị ahịa (51%) nwere nsogbu ịmeghachi ọwa ọhụrụ ma ọ bụ ngwaọrụ ọhụụ, na-egosi na ọ naghị adị mfe mgbe niile itinye ha na atụmatụ CMS.
Iji mezuo njem ndị ahịa na-enweghị ntụpọ nke na-enyere ika ahụ aka ịnapụta ihe ọ bụla onye ahịa chọrọ, oge ọ bụla ha chọrọ ya, ndị na-ere ahịa ga-ebute ụzọ atụmatụ ọtụtụ ngwaọrụ. Nke a chọrọ ọkwa nghọta ka mma, nke pụtara na ndị na-ere ahịa ga-amalite ịdị na-asọpụrụ ma na-eme nka ha chọrọ iji nwee ike iji obi ike na-erigbu ngwa ọrụ a maka ezigbo ebumnuche. Nke a ga - enyere ndị ụdị aka ịmata mkpa ọ dị CMS na ịkwalite atụmatụ na ebumnuche.
Itinye Nkọwa Na CMS
Ọ bụrụ na webụsaịtị wepụtara anaghị enye enweghị ahụmịhe, arụmọrụ jikọtara ọnụ na okike, ohere a na-ewepụta maka ndị ahịa ile anya ọzọ ma ọ bụrụ na enweghị afọ ojuju na ọrụ ahụ. Nyocha site na Verint na IDC achọpụtala na afọ dijitalụ emeela ka o sikwuoro ụdị ike ijigide ndị ahịa dịka teknụzụ ọhụụ na-emepụta nhọrọ na ohere ndị ahịa.
Iji hụ na njem ndị ahịa na-enweghị ntụpọ, ọ bụ ihe dị mkpa maka CMS na-agba ọsọ nke ọma mgbe ejiri ya na njikọta nyiwe ndị ọzọ, dị ka sistemụ mmekọrịta ndị ahịa (CRM). Onye ahịa kwesiri ịnọ n'etiti mkpebi ahịa ọ bụla na nke a abụghị ihe dị iche mgbe ọ na-eche maka atụmatụ CMS. Ngwaọrụ ga-Integrated gafee nzukọ na-ekere òkè na ndị ahịa na ozugbo, na-agbanwe ndị ọbịa n'ime ndị ahịa na-alọghachi ma na-ekwe ka ndị ahịa na-azụ ahịa welie ma nyochaa àgwà ndị ahịa. Enwere ike iji nghọta a na ọrụ a gafee azụmaahịa ahụ, na-etinye ndị otu azụmaahịa dị ka ebe ama ama ama ama ama na ụlọ ọrụ ahụ.
Ahịa na Center
Inwe ike iwepụta ahaziri iche, itinye ọdịnaya ga-ekwe omume naanị ma ọ bụrụ na onye ahịa ahụ nọ n'etiti atụmatụ CMS. Site n'itinye onye ahịa na mbu, ndị na-ere ahịa kwesịrị ịghọta kpọmkwem ụdị ọdịnaya ha na-achọ. Enwere ike ị nweta ọkwa ọkwa a site na nyocha ma ọ bụ njikọta. Ọ ga-akwusi nghọta gafee azụmaahịa ahụ, na-enye ndị otu na nkewa dị iche iche iwu ọdịnaya nke kachasị dị mkpa nye ndị ahịa ha na ndị metụtara ya.
Site n'iji usoro CMS a mee ihe, ọ ga-enye ohere maka ogologo oge nke ọdịnaya, site na ịchọpụta ihe dị mma maka ọdịnihu, yana nke ugbu a. Enwere ike ịkekọrịta ọdịnaya ahaziri iche n'ofe azụmahịa niile na mpụga na atụmanya na ndị ahịa, gafee ọtụtụ usoro teknụzụ. Nke a ga - enyere ndị azụmaahịa aka iji channelụ niile ha tinyere na ya mgbe ha na ndị ọrụ na-ekwurịta okwu n'akụkụ niile nke mkpebi mkpebi.
­­­­­­­­­­­Ọ dị mkpa ugbu a karịa mgbe ọ bụla na ndị na-ere ahịa na-ejide n'aka na ha na-emeghachi omume mgbe niile na mgbanwe n'ime ụlọ ọrụ dijitalụ. Ha aghaghi inwe nghota zuru oke mgbe ha na-eji ngwa na nyiwe ohuru ugbu a. Omume ndị ahịa na-agbanwe agbanwe mgbe niile yana site na iji ngwaọrụ n'oge ahụ, ndị na-ere ahịa nwere ike ịnọ nzọụkwụ abụọ n'ihu n'oge niile.
Tags: CMScms mwekotaọdịnaya managementusoro njikwa ọdịnayaCRMcross-channel mwekotanjikwa mmekọrịta ndị ahịadefinitionidcsquizeziokwuiheKedu ihe bụ cms